Showing १०१-११० of ६५४ items.
'जानी–जानी छातीको ट्याटू देखाएकी होइन'
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह 'ड्रिम्स'बाट नेपाली फिल्ममा प्रवेश गरेकी हुन्। डेब्यू फिल्मबाट पर्याप्त चर्चा बटुलेकी उनी अहिलेकी चल्तीकी कलाकार हुन्। बेलाबखत विवादमा तानिइने उनीसँग गरिएकाे कुराकानी । व्यस्त देखिनुहुन्छ। समय व्यवस्थापन गर्न कत्तिको गाह्रो छ ? अहिले गाह्रो नै भइरहेको छ। फिल्म 'कायरा'को सुटिङ बाँकी नै छ। नयाँ फिल्म 'तिमीसँग'को प्रिमियरको भोलिपल्ट लन्डन जाँदैछु। 'इन्टु मिन्टु' फिल्मको काम पनि केही भ्याएकी छैन। 'तिमीसँग'को प्रमोसन कस्तो भइरहेको छ ? मेरो डेब्यू फिल्म 'ड्रिम्स'को प्रमोसनमा भुवन जी (भुवन केसी)ले मलाई कतै पनि लानुभएन। दोस्रो फिल्म 'ए मेरो हजुर–२' मा निर्माता
प्रकाशित मितिः चैत्र १९, २०७४
"ब्युझौ नेता जि देश डुब्यो"
शार्दूलविऋीडित छन्दमा (मसजसतत गुरू) (१) यस्तो राजनिती बनोस् सबजना सम्मानले हेर्दिउन् जस्ले गर्दछ बैमनष्य यसमा तत्काल यो छोड्दिउन् नेतामा जनमा समान अधिकार् सम्मान उस्तै रहोस् निर्दाको पनि राज्य हो मुलुक हो भन्ने समर्पण् रहोस् (२) नेताका बसमा गरीब जहिल्यै चम्चागिरी बन्दहोस् झुप्रामा यिनको गरीब पन त्यो छेक्ने गरी अन्नहोस् क्वै खाने दिनकै अटस् पटस भै भोकै कुनै बाच्दछन् बर्षौ सम्म कुनै अनाज घरमा कुह्याएरै फाल्दछ्न् (३) यस्तो राजनिती गरिन्छ किन खै मर्ने गरीबै जहाँ नेता छन् धनधान्य यी ऋतु सबै चौमास हान्ने यहाँ खै के पाए यहाँ बिकास जनले बाटो छ वा बत्ति छ? नेताका पिछलङ्गुका घर घरै भाला छ
केकीले बर्षालाई गरिन् रिप्लेस, बन्ने भईन स्वस्तिमाको दिदी
बहुप्रतिक्षित रहेको चलचित्र ‘नाई नभन्नुल ५’ को सुटिङ सुरु भएको छ । मल्टिस्टारर यस चलचित्रको स्टारकास्टलाई लिएर भने यो चलचित्र पनि चर्चामा रह्यो । बिकास आचार्यको निर्देशन रहने ‘नाई नभन्नुल ५’ मा नायिका स्वस्तिमा खड्काको दिदीको रोलको लागि केही नायिकाहरुले अस्वीकार गरेपछि यसको चर्चा पनि भएको थियो । सुरुवातमा स्वस्तिमाको दिदीको रोलका लागि बर्षा सिवाकोटीलाई गयो उनले करियर दरापमा पर्ने डरले स्वस्तिमाको दिदी बन्न मानिन् । त्यसपछि यो अफर अर्काे बर्षा या नेकी बर्षा राउतलाई गयो । ‘नाई नभन्नुल ४’ बाट नै डेब्यु गरेकी बर्षाले यो अफर स्वीकार गर्छिन् की भन्ने थियो तर उनले पनि स्वस्तिमाको दिदी बन्न मानिन् ।
हेर्नुस् कमेडीले भरपुर ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’को ट्रेलर
अभिनेत्री केकी अधिकारीको निर्माण र अभिनयमा बनेको चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बुधवार राजधानीमा एक विशेष कार्यक्रम बिच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । केमडी जनरामा निर्माण भएको चलचित्रको ट्रेलर निकै रमाइलो बनेको छ। ट्रेलरमा पैसाले उत्पन्न गर्ने घटनाहरूलाई रमाइलो तरिकामा देखाइएको छ । विशाल भण्डारीको निर्देशन रहेको चलचित्रमा केकीको अलावा ऋचा शर्मा, बुद्धि तामाङ, विनोद न्यौपाने, रविन्द्र झा, जेविका कार्की , प्रियंका कार्की, कुशाग्र भट्टराई लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।यस अघि कोहलपुर एक्सप्रेसमा समावेश भएको ‘सी..व डब्ल्लु ’ गीत हिट भइसकेको छ । चलचित्रमा अर्
वैदेशिक राेजगारकाे पीडाः तीनै छोरा बाकसमा !
काठमाडौँ । एक साताअघि मात्रै मलेसियाबाट काठमाडौं फर्किएका थमबहादुर रोकालाई उनका कान्छो भाइ धर्मलालले आफू पनि दसैंमा जसरी भए पनि फर्किने बताएका थिए । ‘म दसैंमा आउँछु, त्यतिन्जेल घर गएर तपाईंले बुबाआमालाई हेर्नुहोला,’ साइँला दाइ थमबहादुरलाई कान्छाले भनेका थिए । धर्मलाल आफूले भनेको भन्दा निकै अघि बुधबार नै काठमाडौं आइपुगे तर बाकसमा बन्द भएर । मलेसियामा मृत्यु भएका म्याग्दीका ३४ वर्षीय धर्मलाल रोका । म्याग्दी मालिका–२, रुमको रोका परिवारका दुई छोराको यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीमा गएको देशमा मृत्यु भइसकेको थियो । चार दाजुभाइ भएको परिवारका कान्छा धर्मलालको चैत ११ गते मलेसियामा मृत्यु भयो । उनका जेठा
अनुभवको कारण ‘नाई नभन्नु ल ५’बाट आउट वर्षा ?
केही दिन अघि नायिका वर्षा सिवाकोटीले चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल ५’ छोडेको भन्ने विभिन्न समाचारहरू सार्वजनिक भए । वर्षाले चलचित्र छोड्नुको कारण आफ्नो उमेरकी नायिका स्वस्तिमा खड्काको फुपू बन्ने अफर आएपछि छोडेको बताइएको थियो । यति बेला उक्त भूमिकामा अभिनेत्री केकी अधिकारी अनुबन्धित भइसकेकी छिन् । तर, पछिल्लो केही दिन यता मिडियामा वर्षाले ‘नाई नभन्नु ल ५’ छाेडेकाे नभइ निकालिएको खबर बाहिरिएको छ । चलचित्रबाट वर्षा बाल–कलाकार अनुभव रेग्मीको कारण बाहिरिएको बताइएको छ। खासमा चलचित्र ‘भैरे’को सेटमा वर्षाले अनुभवलाई नराम्रो व्यवहार गरेको कारण अनुभव वर्षासँग रुष्ट भएकाे बताइएकाे छ । अनुभवले निर्देशक बिकासराज
जब कट्रिनाले सलमानको जूठो चिया पिइन्
कुनै बेलाका प्रेमी-प्रेमिका हुन् बलिउड अभिनेता सलमान खान र अभिनेत्री कट्रिना कैफ । प्रेम तोडिएपछि उनीहरुबीच लामो समय पानी बाराबार भयो । तर, पछिल्ला दिनहरुमा उनीहरु फेरि नजिकिएका छन् । तर, प्रेमी-प्रेमिकाको रुपमा नभएर साथी-साथीको रुपमा । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उनीहरु लामो गफ लडाएर बसिरहेका देखिन्छन् । हालै मात्र सलमान र कट्रिनाको एउटा भिडियो भाइरल भएको छ । भिडियोमा उनीहरुले एउटै कपमा पालैपालो चिया पिएको देखिन्छ । पुणेमा आयोजित सलमानको ‘द ब्याङ’ टुरभन्दा अगाडि सलमान, सोनाक्षी, कट्रिना र डजी शाह स्थानीय मिडियासँग कुरा गर्दै थिए । यस अवसरमा सलमान अन्य स्टारहरुसँग पत्रकारहरुको प्रश्नको ज
प्रकाशित मितिः चैत्र १३, २०७४
म दीपकका लागि मर्न नी सक्छु, मार्न नी सक्छुः प्रियंका
नायिका प्रियंका कार्कीलाई हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्यले हलिउड नायिका जस्ती भने । शनिबार प्रियंकाकै अगाडि हरिवंशले यसो भनिरहँदा नायिका मख्ख परिन् । नायिका कार्कीका फेसन स्टाइल र शैली धेरैका लागि आइकन समेत बनेका छन् । चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छोटो समयमा नै चर्चाको शिखरमा पुगेकी नायिका कार्की अहिले ठूला ब्यानरका चलचित्रमा फिट छिन् । आफ्नो भूमिका भन्दा पनि उनी, ठूला ब्यानरका चलचित्रमा अनुवन्धित भएर काम गर्न नै खुशी छिन् । यसैले, उनका डेढ महिनामा ३ वटा चलचित्र रिलिज हुँदैछन्, ती पनि सबै आशा गरिएका । बर्षमा हिट हुने अधिकांश ठूला ब्यानरका चलचित्रमा पि्रयंका नै नायिका हुन्छिन् । उनको काम गर्ने
फ्यानलाई वर्षाको जवाफः अलिकति दुब्लाउँछु ल !
नायिका वर्षा राउतलाई नदुब्लाउन आग्रह गर्दै एक फ्यानले फेसबुकमा कवितात्मक चिठी लेखे । उनले वर्षा लाई ‘मेरी गोलुमोलु’ भन्दै मोटी नै सुहाएको तर्क गरेका थिए । सो चिठी वर्षाले पढिन् र मख्खै परिन् । ‘पढ्दापढ्दै मेरा गाला राता भए, ओँठमा हाँसो निस्कियो,’ उनले भनिन् । उनले खुशी भएर सो चिठी परिवारमा अरुलाई पनि देखाइन् । ‘चिठीको कुन अंशले बढि मन छोयो ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिइन्, ‘पाइन्ट, वानपीस नसुहाए कुर्ता सुरुवाल नै लगाउ भन्ने चाहिँ ।’ तर, उनले कुर्ता-सुरुवाल आफूलाई सुहाउने भए पनि पाइन्ट नलगाई साध्ये नहुने बताइन् । वर्षा पहिले त दुब्ली नै थिइन् । उनी ३ वर्षदेखि मोटाउन थालेकी हुन् । गाला
मिडियाकै अगाडी रोईन् आँचल
‘नाई नभन्नुल ४’ बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रबेश गरेकी नायिका आँचल शर्मा छोटो समयमा नै चर्चामा आएकी नायिका हुन् । उनी आफनो अभिनय र फिल्मबाट भन्दा पनि पल शाहसंगको नामको कारण चर्चामा आईन् । कतिले उनलाई पलको कारणले पनि चिनिएकी हुन् भन्नेहरुको कमी थिएन । तर आजबाट रिलिज भईरहेको चलचित्र ‘शत्रु गते’ हेरेपछि भने आँचलको पनि प्रशंसा गर्ने बढ्नेछन् । ‘शत्रु गते’ हेरेपछि दर्शकहरुले आँचलको प्रशंसा गरेपछि उनी भावुक बनेकीछिन् । दर्शकहरुले आँचलको नाम लिईदै चियरअप गरेपछि सञ्चारकर्मीहरुसंग बोल्नेक्रममा उनी रोएकी थिईन् । उनले आँखाभरी आँसु बगाउँदै उनले भनिन् “पल जी र मेरो हरेक सीन आउँदा म त्यही सिचुएसनमा साँच